Ozark ရာသီ 2, အပိုင်း9ပြန်လည်စုစည်း: အဆိုပါဟာရှ - Netflix မူရင်း
Ozark ရာသီ 2, အပိုင်း9ပြန်လည်စုစည်း: အဆိုပါဟာရှ
Ozark Season2Episode9Recap
Credit: Ozark - Jessica Miglio / Netflix
အံ့’s ခြင်းရဲ့သံလက်သီးရာသီ 2: ပရိသတ်တွေသိရန်လိုအပ်ပါတယ်အရာအားလုံး Ozark ရာသီ3ကို Netflix တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်လွှတ်မည်နည်း။
အဆိုပါ Badger, ရာသီ 2, Ozark ၏အပိုင်း9၌, Snells သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်စစ်ဆေးနှင့် Byrde မိသားစုဖျက်သိမ်းရင်ဆိုင်နေရသည်။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဇာတ်လမ်းတွဲ ၉ ဖြစ်သည့် The Badger ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည် Snells များကိုအခြားတစ်ရက်တွင်တွေ့မြင်ရန်နေထိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းပို့ရန်စိတ်ဓာတ်ကျမိသည်။ ပြန်လာသောအခါသူတို့၏အလွန်ကိုယ်ပိုင်တွေ့ကြံ - ချစ်စရာလမ်းတစ် ဦး flashback ပြီးနောက်ကျနော်တို့ Darlene ပစ်ခတ်ထွက်ပြီးနောက်ကိုင်ထားရန်ဆန္ဒရှိရှိရာပစ္စုပ္ပန်, ဖြတ်လေ၏။ သူကအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ Darlene မှာတာဝန်ရှိတယ်။ သတိထား။
House Byrde မှာ Charlotte ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကြေညာချက်ပြီးနောက်နံနက်ဖြစ်ပြီးလူတိုင်းကစိတ်ဆိုးကြပါတယ်။ သူမနှင့် Wendy တင်းပါးခေါင်းများ။
အခြားတစ်နေရာတွင် Lickety Splitz ကို Cade နှင့် Wyatt တို့ကပိုင်ဆိုင်သည်။ Cade ကမာတီရဲ့ငွေကိုလိုချင်တယ်။ ထို့နောက်သူမကရာဇ ၀ တ်မှုများကို Sheriff Nix သို့တိုင်ကြားသော်လည်း၎င်းတို့သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းငြင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကနီးပါး $ 20 ခမ်းနားကိုယူ။ Yikes!
မာတီရုံမကောင်းတဲ့နေ့ကရှိခြင်းပါပဲ။ အဆိုပါ Snell မြေယာပိတ်ဆို့အဖြစ်ဆောက်လုပ်ရေး, လောင်းကစားရုံအပေါ်တက်ကျင်းပလျက်ရှိသည်။ အသစ်တာဝန်ခံအသစ် Darlene ကသူတို့သဘောတူညီချက်သေပြီဟုမာတီအားပြောခဲ့သည်
မာတီသည်ဟယ်လင်အားသူမပါဘဲ Snells များကိုရွေ့လျားခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်သည်။ သူကသူမ၏အဘို့အမှုအရာတို့ကိုရှင်းလင်းဖို့ငြင်းဆန်ပေမယ့် Wendy သူအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်အခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။
အဆိုပါ Langmore ရဲ့မှာရုသ Wyatt ရဲ့ခိုးယူပိုက်ဆံပြန်တောင်းဆိုသည်။ သူကမာသက Russ ကိုသတ်တယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်သူကသိမ်းထားချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ရုသကတော့သူမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့အခိုင်အမာဆိုတယ်။ ရာသီကျော်မတိုင်မီသူတို့ကကျိန်းသေထိပ်တိုက်တွေ့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ရုသပြီးနောက် Cade ရဲ့ပိုက်ဆံအဘို့အကြွလာပြီးနောက်, ဒါပေမယ့်သူကတစ် ဦး ရန်ပွဲတက်ထားပါတယ်။
showdowns ၏စကားပြောသော, Charlotte ရဲ့ရှေ့နေလွတ်မြောက်ခြင်းစာတမ်းများလက်မှတ်ရေးထိုးရန် Byrde အိမ်မှာစောင့်ဆိုင်း။ သူတို့မှာလက်မှတ်ထိုးရန် ၂ ရက်သို့မဟုတ်မိသားစုနှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တရားတရားရုံးသို့ထွက်လာလိမ့်မည်။ Wendy သည်မထင်မှတ်သောအခြေအနေတွင်ရှိနေပြီးမာတီက၎င်းတို့မျှော်လင့်ထားသည်ထက်စောလျင်စွာပြေးနိုင်မည်ဟုအကြံပြုသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Petty ကသူဌေးကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံမှာအလုပ်လုပ်ဖို့လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီများကိုစေလွှတ်ခြင်းဖြင့်သူရဲ့ KC Mob နဲ့ဂိုဏ်းနှစ်ခုလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းဖြုတ်ချဖို့သူဌေးအတွက်အစီအစဉ်ကိုဖော်ပြထားသည်။ ထို့နောက်သူသည်မိခင်ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရန်ချီကာဂိုသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ Psycho Petty ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့။ Ozark ။
အိမ်၌, Byrdes ပြန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရ။ မာတီသည်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး Wendy သည် Wilkes သို့သွားသည်။ Wilkes ကသူတို့ကိုကော်မရှင်နဲ့အတူဒုတိယအခွင့်အရေးရခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကသူ့ကိုအတည်ပြုပေးဖို့လဲလှယ်ပေးမှာပါ။
ထို့နောက်မာတီနှင့်ဟယ်လင်တို့သည်ယာကုပ်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူတို့ကသူ့ကိုရှင်းပြသည်။ အမွေးကြမ်းသောဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းအချို့ကြောင့်သူ၏မြေပေါ်တွင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများကိုခွင့်ပြုထားသည်။ သူကအမြဲတမ်းရန်ဖြစ်တတ်ပေမယ့် Darlene မရှိရင်ဒီကိစ္စကိုဆန့်ကျင်စွာလုပ်ဖို့ယာကုပ်ကသူတို့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုစဉ်းစားသည်။ မာတီကဒီမြေကွက်ကသူတို့ကိုချမ်းသာစေပြီးလုံခြုံစေလိမ့်မယ်လို့အခိုင်အမာဆိုပေမယ့်သူ့ဇနီးကဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာယာကုပ်သိတယ်။
အဆိုပါ Langmores '' မှာ, Wyatt Mizzou ထံမှသူ၏စာရရှိသွားတဲ့: သူလက်ခံခဲ့သည်ရဲ့! သူနေဆဲ Russ မှဖြစ်ပျက်အပေါ်တက်ဆွဲထားရဲ့အဖြစ်သူသော်လည်း, စွန့်ခွာရန်မိမိကိုမိမိမဆောင်ခဲ့နိုင်။ , ရုသ tock ကို tick ။
ယာကုပ်သည်ဂိုဒေါင်နှင့်သူ၏သဘောတူညီချက်ကို Darlene သို့ရှင်းပြရန်အိမ်သို့သွားခဲ့သည်။ သူသည်ပုံမှန်အားဖြင့် pushback ရှိသော်လည်းသူသည်ဥပဒေကိုချထားသည်။ အစဉ်အဆက်ငါ့ကိုအားနည်းစေမထားပါနဲ့, သူကပြောပါတယ်။
ယနေ့အထိသူမ၏အရှိဆုံးဆင်းရဲသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်အဘယျသို့မှာတော့ Wendy တောင်းပန်မှ Charlotte ရဲ့ရှေ့နေကိုကြည့်ရှုသွားသည်။ အဲဒီအစားသူမပဲသူမ၏ခြိမ်းခြောက်တက်အဆုံးသတ်ထားသည်။
ဤအတောအတွင်း Nix သည် Cade သို့ကိုယ်တိုင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ Wendy လိုပဲသူဟာသူကိုခြိမ်းခြောက်ပြီးကတိပေးလိမ့်မယ်။
နောက်ပိုင်းတွင်ကော်မရှင်သည် Marty ကိုစတင်မေးမြန်းခဲ့သည်။ သူတို့ကသိသာတွန့်ဆုတ်နေပေမယ့်မာတီကသူ၏ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်သူတို့ကိုသူတို့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ယာကုပ်ကိုအသုံးပြုသည်။ Darlene (ဘယ်သူမှန်းဆခဲ့ကြလိမ့်မည်နည်း) မပျော်ရွှင်သည်။ အရာအလုံးစုံခြုံငုံအလားအလာရှာဖွေနေကြသည်မဟုတ်နှင့်ဟယ်လင် Darlene လိုင်းမနေပါလိမ့်မယ်စိုးရိမ်နေကြသည်။
နောက်ဆုံးတွင်ကော်မရှင်နာတစ် ဦး က Byrdes သည် KC Mob ကိုစောင့်ရှောက်နေသရွေ့သူများကိုအခြားသူများကိုလှည့်စားနိုင်သည်ဟုဆိုသည် မာတီသူတို့ပါဝင်ပတ်သက်လိမ့်မည်မဟုတ်ကတိ။ အမှတ်အသားပြုကြပါစို့ သော နိဂုံးချုပ်သို့မဟုတ်လာမည့်ရာသီအတွက်ပြန်၎င်း၏အရုပ်ဆိုးခေါင်းကိုနောက်ကျောမှလာလိမ့်မည်ဟုတစ်ခုအဖြစ်ရွှေ့ပါ။
အိမ်သို့ပြန်ရောက်သည့်အချိန်တွင် Charlotte နှင့်သူမ၏မိဘများမှာထိုအရာရှိသည်။ သူမသည်နှင့် Wendy ကယ့်ကိုပျံသန်းဖို့စတင်များနှင့် Wendy Charlotte ရဲ့အရာတို့ကိုထုတ်ပစ်ခြင်းဖြင့်အလျင်အမြန်တုံ့ပြန်။ Charlotte ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ပေမယ့် Wendy သူမရှေ့နေခြိမ်းခြောက်ကြောင်းစိတ်ဆိုးနေဆဲမာတီအတွက်နှစ်သိမ့်ရှာတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အဆိုပါ Langmores '' မှာ, Cade Nix အကြောင်းကိုရုသရင်ဆိုင်။ Charlotte ကိုစတင်ရှာဖွေသော Wendy ကသူတို့အားကြားဖြတ်ထားသည်။ သူမကိုတွေ့သောအခါအဝေးကကြည့်သည်။ သူမစောင့်နေစဉ်ကော်မရှင်သည်၎င်းတို့၏လိုင်စင်ကိုပေးနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖုန်းခေါ်သည်။ ဤအတောအတွင်း Marty သည်အိမ်တွင် Ozarks မှလက်မှတ်များကိုရှာဖွေနေသည်။
အဆိုပါတဟာရှ၏အဆုံးအားဖြင့်, အပိုငျးပိုငျးအားလုံးပေါက်ကွဲနိဂုံးချုပ်အတွက်ကစားနေကြသည်။ Cade က Petty ကိုသွားပြီးမာတီအကြောင်းပြောပြတယ်။ မာတီသူလောင်းကစားရုံအတည်ပြုသည်ဒုတိယအာမခံသည်ရဲ့သူမ၏ပြောပြ, ရုသထံသို့လာ၏။ ဒါပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ Snells တွေကနံနက်ခင်းလမ်းလျှောက်တာပါ။
သူတို့ကော်ဖီသောက်ရင်းတောအုပ်များကိုလှည့်ပတ်နေချိန်တွင်ယာကုပ်သည်မိမိလက်ကိုဓါးဖြင့်ပုန်းနေသည်။ သူ Darlene ကိုထိုးနှက်သည့်အခါနောက်ကျသွားပြီ။ သူမသည်မိမိသောက်အဆိပ်သင့်ရဲ့သူသည်အရွက်၌သေ၏။ ငါကတစ်ခုခုဆိုလိုတာသေချာအောင်ပါလိမ့်မယ်သူမကပြောပါတယ်။
ဒီဆက်ဆက်ကျနော်တို့နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲတယ်သောအရာကိုထက် Snell များအတွက်ပိုမိုသင့်လျော်သောအဆုံးဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ငါမည်သို့ပင်ဆိုစေစိတ်ပျက်မိပါတယ်။ မြင်ကွင်းကအရမ်းကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ထိတွေ့မှုတစ်ခုဖြစ်တယ် လမ်း ပို။ အရေးကြီးသည် - မှား Snell offed ရတဲ့နှင့်အတူ။ အလားအလာကောင်းတဲ့နိဂုံးချုပ်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါရာသီ2ကိုကျန်းမာစွာသတိနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ပိုများသော netflix:Netflix တွင်အကောင်းဆုံးရာဇ ၀ တ်မှုပြသမှု ၅၀
30 အစေး 30
ဆယ်ကျော်သက် mom, နှင့် hulu အပေါ်
အချိန်ကာလအသစ်များသည် netflix တွင်ရှိလိမ့်မည်